तलब बढेको खबर सुनेपछि सांसदहरु हाजिर गरेर कहाँ गए ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
तलब बढेको खबर सुनेपछि सांसदहरु हाजिर गरेर कहाँ गए ?
प्रकाशित मिति : पुस २५, २०७३ सोमबार
व्यवस्थापिका संसदमा कोरम नपुगेपछि संसदको बैठक आधा घण्टा स्थगित भयो। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक अघि बढाउने कार्यसूची थियो। विधेयकमा संशोधनका लागि पठाउने प्रस्ताव पारित हुनु अघि कोरम नपुगेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक आधा घण्टाकालागि स्थगित गरेकी थिइन्।
नेमकिपाका सांसद डिल्लीराज काफ्लेले कोरम गणना माग गरेका थिए। काफ्लेको आग्रहपछि सांसदको गणना गर्दा ११६ सांसदमात्र बैठक स्थलमा उपस्थित थिए। व्यवस्थापिका संसद नियमावली अनुसार संसद सुचारु गर्न १४९ सांसद संख्या आवश्यक पर्छ।
स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक सम्वन्धि छलफल कार्यसूचिको छैटौं क्रममा राखिएको थियो। दिउँसो एक बजे सुरु भएको बैठकमा ४०४ सांसदको हाजिर भएपनि साँढे चारसम्म अधिकांश सांसद बाहिरिएका थिए। आधा घण्टा बैठक स्थगित भएपछि प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरुले आफ्ना सांसदलाई फोन गरेर बोलाएका थिए।
फोन गरेर सांसद बोलाए पछि बसेको संसद बैठकमा भने कोरम पुगेको छ। मंगलबार सभामुख राजधानी बाहिर जाने भएका कारण सो विधेयक आजै संशोधनकालागि पठाउने तयारी गरिएको थियो। स्थगन पछि बसेको बैठकले विधेयक संशोधनका लागि पठाएको छ।
सभामुखले आजै राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त सांसदहरुको तलव सुविधा बृद्धि सम्बन्धि विधेयक प्रमाणिकरण भएको पत्र पढेर संसद बैठकमा सुनाएकी थिइन्। तलव बढेको पत्र प्राप्त भएपछि सांसदहरु बैठकबाट बाहिरिएको भन्दै बैठक स्थगितपछि सांसहरुले नै हाँसो ठट्टा गरेका थिए। नागरिक दैनिक